Gaboraraky ny sarety entin-tanana Manakorontana sy manimba fananan’olona
Fitohanana eto an-drenivohitra Hifanampy ny minisiteran’ny fitaterana sy ny ATT ary ny polisy
Tena nampiteny ny moana nanomboka ny zoma teo ny fitohanana eto an-drenivohitra sy ny manodidina.
Fitaterana Ahiana hifandramatra ny mpandeha sy ny resevera
Vidin-tsolika midina mira saran-dalana midina. Io no ao an-tsain’ny olona avy hatrany vantany vao nandre tamin’ny fampahalalam-baovao halina fa nahita marimaritra iraisana amin’ny fampidinana ny vidin-tsolika ny fanjakana sy ireo kaompanian-tsolika.
Fitarainana momba ny mpitatitra Ny zotra 163 no tena voakasika
Nampiantso ireo lehibena koperativa miasa eto an-drenivohitra ireo tompon’andraikitra voakasik’izany ny talata 18 jona teo toy ny filohan’ny UCTU, ny filohan’ny FAM notarihin-dRaveloson Landy, tale misahana ny fifamoivoizana eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra.
Lalàna momba ny “taxi” eto Iarivo Mamadi-dresaka ry Clémence FTAR, hoy ny Kaominina
Tsy nisy didim-pitondrana vaovao navoaka na voasonia momba ny « taxi-ville » fa taorian’ny fihaonana tamin’ny filankevitra monisipaly farany no nanazavana fa misy ireo fitsipika mifehy
Mila fandinihana manokana ny sarety entin-tanana mifamezivezy eto Antananarivo Renivohitra. Tena mibaribary ny tsy fanajana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana, fanimbana fananan’olona, fanelingelenana miteraka fitohanana,…
Mitarika fimenomenonana ho an’ny besinimaro, saingy matetika vava be na teny ratsy aza no setriny. Fahita eny an-dalambe eny ny sarety feno enta-mavesatra misavovona zara raha misy olona roa na telo mitondra azy, hany ka tsy tana intsony fa mifatratra any amina fiaran’olona, ohatra, indrindra rehefa midim-pidinana izay. Dia mbola vitan’ny “lefero izahay fa madinika” ve kanefa ny fananan’olona simba ? Ny tena olana amin’ity sehatra ity dia sady tsy misy fiantohana na “assurance” no tsy misy taratasy ny sarety ary tsy manana ny hoenti-manana hanefana ny simba ny mpitarika sarety ka miala maina amin’ny ankapobeny rehefa mifandona aminy. Tsy azon’ny tompon’andraikitra mahefa handraisana fepetra sy fandaminana manokana ara-dalàna mihitsy ve izy io fa tazanim-potsiny ? Ireny natao nipoapoaka tamin’ny haino aman-jery ireny ny filazana fa hampandoavina onitra 100 000 hatramin’ny 1000 000Ar ny taksibe tsy manaja fifamoivoizana, ka maninona no tsy afaka handray fepetra amin’ireny sarety sy posy ireny hisorohana ny gaboraraka ? Tsy tokony ho fialokalofana amin’ny tsy fanarahan-dalàna sy fanimbana fananan’olona ny fari-piainana ambany na ambony fa natao ho an’ny rehetra ny lalàna.